नेपाली नेताहरु कोबाट असुरक्षित ? « Jana Aastha News Online
नेपाली नेताहरु कोबाट असुरक्षित ?
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:१५
मंगलबार बिहान साढे नौ बजे मीनभवन, शंखमूल मार्गस्थित जनता टेलिभिजनको कार्यालयमा बसिरहेका टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलको मोबाइल बज्यो ।
दुई घण्टी नबज्दै पौडेल झटपट बाहिर निस्केर मुख छोप्दै कुरा गर्न थाले । कुनै सामाजिक सञ्जालको मेसेञ्जर कलको रिंगटोन बजेकाले सँगै कुराकानी गरिरहेकाहरुलाई लाग्यो ‘कमरेडको घरबाट फोन आएछ र निजी कुरो भएकाले बाहिर निस्किए’ । तर, होइन रहेछ । एक छिनपछि कोठाभित्र पस्दै पौडेल भन्न थाले ‘माधव कमरेडको फोन’ । उनले थपे ‘हिजोआज बालुवाटारनिकट बाहेकका नेताले ह्वाट्सएप र भाइबरमा मात्र कुराकानी गर्नुहुन्छ । अहिले माधव कमरेडले पनि ह्वाटस्अपमै गर्नुभएको हो ।’
दुई घण्टी नबज्दै पौडेल झटपट बाहिर निस्केर मुख छोप्दै कुरा गर्न थाले । एक छिनपछि कोठाभित्र पस्दै पौडेल भन्न थाले ‘माधव कमरेडको फोन’ ।
धेरैजना नेकपा नेताको फोन ट्यापिङ्ग हुने गरेको जानकारी एक महिनाअघि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले डेलिगेशनमा आएका वामपन्थी इञ्जिनियरहरूलाई बताएका थिए ।
अर्कोतर्फ,कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक कुनैपनि नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार नेपालको संविधानले समेत सुरक्षित गरेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको उपधारा १ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूत गरिएको छ ।